IBHUNGALOW ESELUNXENI (Pauline's Perch)
Wamkelekile kuPauline's Perch! Igumbi lethu lokulala eli-3 elisandula ukwakhiwa, igumbi lokuhlambela eli-1.5 elivulekileyo libekwe kwinduli enye ukusuka elunxwemeni ngasemva kweManitou Springs Hotel kunye neSpa. Yonwabela imbonakalo yechibi elihle kunye nemozulu kwindawo yethu enkulu enegumbi lokuphumla / ifanitshala yokutyela kunye ne-BBQ okanye uhlale ngaphakathi udlale imidlalo, bukela iNetflix / intambo, kwaye wonwabele umoya opholileyo. Sinikezela ngeWiFi kunye neyokupaka. Siyindawo yosapho enobuhlobo kubandakanya ibhedi yokuhamba kunye nesitulo esiphakamileyo kunye nezinye izinto ezininzi eziluncedo.
40" HDTV ene-I-Chromecast, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
5.0 ·Izimvo eziyi-32
Ifakwe kumbindi weSaskatchewan, iManitou Beach yindawo ekuchithelwa kuyo iholide ebekwe elunxwemeni lweLake Manitou. Ichibi elincinane laseManitou lahlukile kuMntla Merika kwaye lelinye lamanzi amathathu kuphela afana nalo kwiplanethi. Iphezulu kumxholo wamaminerali, ulusu kunye nomzimba unokufumana ukuphiliswa kwendalo kunye nonyango. Ziphathe echibini elishushu okanye ngaphandle elangeni! Rente
Ezinye iimbalasane zaseManitou ziquka ukudanisa e-Danceland, ukuthenga kwimizobo yasekhaya kunye neegalari zakudala, ukuhambahamba kwenye yeendlela, ukonwabela usuku eWellington Park, okanye ukuthatha umdlalo wegalufa, igalufa encinci, idisk yegalufa, okanye yonwabela imuvi kwindawo yemidlalo yeqonga. IWatrous ekufutshane ibonelela ngezincomo ezigcweleyo zeenkonzo kubandakanya iindawo ezininzi zokudlala zabantwana. Kukho amabala e-baseball, imigodi yehashe, kunye neminyhadala emininzi yonyaka ukonwabela iintsuku. Thatha usuku lwe-spa okanye uhlale kwi-patio kwaye uphumle elangeni okanye uphume emanzini ngokuhamba ngesikhephe, ukukhwela isikhephe, i-kayaking, okanye ukukhwela inqanawa!
Sifumaneka ngefowuni, i-imeyile, kunye nesicatshulwa kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Ukuba ufuna nantoni na okanye unemibuzo, siyakukhuthaza ukuba uqhagamshelane nathi kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda.